Ukraine: Dad laga soo celiyey Shiinaha oo shacab cadhaysani basaskii siday weerareen - BBC News Somali
Mudaharaadayaal shiidaya basaskii dadka siday
Tobannaan qof oo mudaharaadaya ayaa magaalo Ukraine ku taal ku weeraray basas siday dad laga soo celiye dalka Shiinaha ee cudurka Coronavirus ka dillaacay.
Dadka la soo celiyey ayaa la geeyey isbitaal ku yaal magaalada Novi Sanzhary, ee badhtamaha gobolka Poltava, halkaas oo lagu karantiimayn doono muddo 14 maalmood ah.
Madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa ku booriyey dadkaa mudaharaadaya in ay u damqadaan dadkaas.
Nabad sugidda Ukraine ee magaceeda loo soo gaabiyo SBU ayaa sheegtay in email been ah oo la sheegayo inu uu ka soo baxay wasaaradda caafimaadka uu ku qoran yahay war beena oo ah in dadkaa la soo celinayaa ay qabaan cudurka.
Saraakiil ka tirsan SBU ayaa sheegay in ay haatan baadhayaan ciddii beentaa faafisay.
Askarta joojinaysa mudaharaadayaasha
Ukraine ilaa haatan may xaqiijinin in dalkeeda laga helay qof qaba cudurka coronavirus, oo dabayaaqadii sannadkii hore ka dillaacay gobolka Hubei ee dalka Shiinaha.
Si ay diir-nax ugu muujiso dadka la soo celiyey, ayaa wasiirka caafimaadka Ukraine, Zoryana Skaletska, waxay sheegtay in ay dadkaa kariintiimada la geli doonto oo ay wasaaradda halkaa ka soo maamuli doonto iyadoo internet-ka adeegsanaysa.
"Waxan rajaynayaa in joogitaankayga halkaasi uu dejin doono shacabka magaalada Novi Sanzhary iyo guud ahaan ba dalka" ayay ku tidhi qoraal ay Facebook ku baahisay.
Khamiistii ayaa 45 qof oo reer Ukraine ah iyo 27 qof oo shisheeye ah laga soo qaaday magaalada Wuhan ee Shiinaha oo ah halkii uu ka dillaacay cudurka coronavirus oo waxa la geeyey magaalada Kharkiv ee bariga Ukraine.
Lix bas ayaa markii dambe u qaaday isbitaal ku yaal magaalada Novi Sanzhary waana halka ay dadka mudaharaadayaa basaskii siday ku weerareen oo shiid hadhka kaga dhigeen.
Baabuurta gaashaaman ee ciidanka ayaa magaaladaa yar la geeyey.
Iska hor imaad culus oo dhex maray shacabkii iyo booliska ka dib ayaa ciidanka ay u suurto gashay in ay wadadii furaan oo ay dadkii geeyaan isbitaalkaa lagu karantiimayn doono 14 maalmood.
Ra'isal wasaaraha Ukraine, Oleksiy Honacharuk, wasiirka caafimaadka, Zoryana Skaletska iyo wasiirka arimaha gudaha, Arsen Avakov ayaa dhamaantood gaadhay magaaladaas si ay u dejiyeen xiisadda taagan.
Muuqaal baraha bulshadu ku xidhiidho ee internet-ka lagu fidiyey ayaa muujinaya Avakov oo dadka mudaharaadaya ku leh "Dadkani maaha dad bukaana oo cudurka qaba, waa dad caafimaad qaba laakiin ka hortag iyo hubsiimo uun loo karantiimaynayo".